Somaliland Oo Shaacisay inay Samaynayso Xeerkii Hawl-gabka iyo Mag-dhawga Shaqaalaha: Waraysi Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Somaliland Oo Shaacisay inay Samaynayso Xeerkii Hawl-gabka iyo Mag-dhawga Shaqaalaha: Waraysi Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha
Hargeysaa (SDWO): Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaacisey inay samaynayso xeerarkii hawl-gabka iyo mag-dhowga Shaqaalaha dawladda.waxa kaloo ay caddaysay in hawl-wadeennada dawladdu aanay shaqeyn karin wax ka badan siddeeda saacadood ee sharciga ah.
Waraysigan wuxuu u dhacay sidan:-
J: Curinta hawshani waa mid sannado badan soo socotay, oo dawladdii Daahir Rayaale wax bay ka fikiraysay, madaxweynihii hore Somaliland guddi ayuu u saaray la yidhaahdo tayeynta shaqaalaha dawladda, guddida siyaasad u sameynta shaqaalaha dawladda oo aheyd guddi wasiirro ah, waxaanay ka fikireen shaqaalaha sidii aynu u horumarin lahayn.
Waananu qorney shaqaaluhu waxay u baahan yihiin, waxaana loo baadi doon-tagey sidii deeq iyo deynba loogu soo heli-lahaa, ama dawladdu ha is kabto ama dawlad shisheeye ha kabaane, innaga oo waxeenu inoo dhan yahay aynu ula shir tagnay, tayeynta shaqaalaha dawladda waxa kaalin weyn ka qaatay machadka shaqaalaha dawladda oo in badan oo shaqaalaha ahi ka aflaxeen.
J: Saddex wasaaradood uun baa imika shaqada habeenkii iyo maalintii soo noqda oo kala ah, wakaallada duulista, wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda caafimaadka, waa laga yaaba inay wasaarado kalena leeyihiin hamigaa, shaqaalahan badan ee is dul tuulan dawada aanu u haynaana waa inaanu shiftiyo [kaltan] ay shaqeeyaan aanu u qaybino.
Waxaana nagu waajiba in aan qofka shaqaalaha ah siddeed saacadood wax ka badan lagu shaqeysan, baadhitaankan iyo madax taabashadan ayay ku soo bixi doontaa inta wasaaradood ee galin danbe shaqeeya inay xuquuqo dheerada helaan iyo in waxyaabo lagu kabi karaa inay jiraan.
J: Faraq weyn ayaa u dhexeeya shaqada iyo in aynu agoontii ilaalino, intii la is lahaa xaafadaha qaar ilaaliya ayaa dayac badani dhacay, goobaha qaar markaad tagtid ayaad arkeysaa inaanay cidiba joogin, ee agoontii lacagtii la siiyo, miisaaniyadiina lagu buuxiyo, taasina waxay keenaysaa dayac badan, laakiin shaqadaasi in qofkii khibrada u lahaa lagu beddelaa waa khasab, tuulada maanta qofkii kalkaaliyaha ka ahaa amase dhakhtarku ka dhintay ee aynu qarinay oo bulshadii waydo adeegii kalkaaliyaha ama dhakhtarku hayey.
Maalin kasta boqolaal qof ayaa dayaca iyo beenta aynu sheegayno inagaga dhinta iyo qarsoodiga aynu xaafad kaliya oo agoon ah wax tara aynu is leenahay, markaa qofkii aanu hawsha u dirsaney haddii uu meesha joogo waa sax, haddii kalena warbixinta aanu keeno ay noqoto halkaa ma joogo qofkii aynu ku ogeyn.
Sidee laga yeelayaa? Dee qaran ayuu u soo shaqeeyay qoysku ku dhex dayacmi mayso Insha Allaah oo dawladdu way ka war hayn doontaa, laakiin xogta kowaad waxa weeye inaanu caddeyno in qofkii shaqada degaankaas ka hayey inuu joogo iyo inaanu joogin.
J: Shirkadani waa khuburro dawladeenu markii aynu dalbaneynay in leyna caawiyo oo aqoon iyo qalaba leynaga caawiyo, hay’adda shaqaalaha dawladu wey isku filan tahay inay wax walba qabato laakiin waxaanu u baahanahay cid nala adeegta oo waayo aragnimo nagu kordhisa si aanu u gaadhno hawlahaasi, qalabkana waxaa uu noo saamaxay inaanu indhaha iyo farahaba qaadno, warbaahinta ayaanu ku baahiney.
Waxaanu sheegnay in aanu u baahanahay shirkad takhasuuskeedu yahay diwaangalinta shaqaalaha dawladda, waxaana soo xareystay shirkado ku dhaw ilaa 21 shirkadood oo gudo iyo dibadba leh, shuruuda ku xidhneydna waxa ay aheyd in shirkadu ay dalka ku leedahay muwaadinin ilaa qodobo sideeda ayaanu u eegeynay markaa shirkadana waxa ay buuxisay shuruudihii aanu uga baahneyn shirkadaha.
J: Qofka shaqaalaha ah shan qodob uun baa lagu qaadan karaa, in kaalini ay banaanato, in qofka miisaaniyad loo hayo iyo in la baahiyo oo la tartamo, in guuleystayaal la helo, in qofkii la tababaro oo indhafur loo sameeyo si uu qofku u ogaado wixii xaq loogu leeyahay iyo waxa uu xaq u leeyahay, inta badana dayaca shaqada waxa keena nidaamkii hore ee qofkan shaqaalaha ahi uu ku yimid, in qofkii la soo dacweeyo, in gudi anshax saxeexdo, in kiisaskiisi lagu lifaaqay ma shaqeystenimo wakhtiga oo uu ka habsaamo iyo inuu faro taagtaag leeyahay.
Intaas kadib marka laga wada fadhiisto laga soo dacweeyo hay’adda laga eryayo amase wasaaradu ma tidhaaho naga eri ee waxa ay tidhaaha fadlan hay’adda shaqaalahey waajibkaaga ka gudo, hay’adduna dib ayay u eegtaa oo waxa ay qiimeysa qofkani heerkii shaqada lagaga caydhin lahaa ma gaadhay, mise canaan iyo digniin ayaa xaq loogu leeyahay.
Dib ayaanu u baadhnaa markaa hadii qofkani aanu aheyn xadhka goys shaqada waanu ku celinaa, hadii kalena talaabada uu mudan yahay ayaanu ka qaadnaa, markaa shaqaalaha waxa muhiima inaanu xeerkii shaqaalaha dar-dargalino, shaqaalahana waxaan leeyahay maaha is difaac iyo dhanka xeerarka inaynu wax ka eegnee kaalaya oo wax barta oo aqoontiina korodhsada.
J: Qoddobka 23aad faqradiisa 1-aad ee sharciga shaqaalaha dawladdu wuxuu xusayaa “Badbaadada bulsho iyo magdhowga qofka shaqaalaha ahi isagoo shaqo ku jira ku dhinto, ku bukoodo ama ku dhaawacmo, xuquuda hawlgabka iyo abaal-marinta kale iyo gunnada ku noolaanshaha ee lagu talogalay shaqooyin gaar ah.
Waxaa loo dejinayaa xeerar u gaar ah’ waxaa halkaa ka cad in aan wali la dhammaysitirin xeerka hawlgabka iyo magdhawga oo noqon doona labada qoddob oo aan degdeg u samayn doono.